Tartankii Ciyaaraha Kubada Cagta Ee Gobolada Iyo MM Deegaanka Oo Meel Fiican Maraya - Cakaara News
Tartankii Ciyaaraha Kubada Cagta Ee Gobolada Iyo MM Deegaanka Oo Meel Fiican Maraya
Jigjiga(Cakaaranews) Sabti 5ta August 2017. tartankii kubada cagta ee gobolada iyo maamul magaalooyinka Deegaanka oo maalmahanba kasocday garoonka casriga ah ee xarunta deegaanka ee magaalada jigjiga ayaa Waxaa maanta ciyaaro aad u xiiso badani dhaxmareen kooxaha kawada tirsan group A ee Gobolka Sitti iyo MM Godey iyo waliba kooxaha kubadada cagta ee Gobolka Daawa iyo gobolka Jarar. Sidookalana, galinkii danbe ee maanta ayaa iyana waxaa wada ciyaaray kooxaha kawada tiran Group B ee kala ah xulka kubada cagta ee GobolkaErer iyo Maamulka Magaalada Jigjiga.
Hadaba, ciyaartan dhexmartay 2dan kooxood oo ay koox waliba ku doonaysay inay oogu gudubto wareega 8da ayaa waxaa maanta galinkii hore wada ciyaaray xulka kubada cagta ee gobolka sitti iyo mm godey oo ay halkaas ku dhaxmartay ciyaar aad u quruxbadan islamarkaana ay guushu kuraacday gobolka sitti kadib markii ay kaga adkaadeen 2 gool iyo 0 islamarkaana ay ciyaartu ku dhamaatay sidaas.
Dhanka kale, waxaa iyana wada ciyaaray kooxaha kubada cagta ee gobolka daawa iyo gobolka Jarar halkaas oo labada kooxoodba ay kusoo bandhigeen ciyaar wanaag aad u quruxbadan oo soo jiidatay taageerayaasha labada kooxood, waxayna ciyaartu wakhtigii loogu talagalay kudhamaatay 2-1 oo ay guushu ku raacday gobolka daawa. Iyadoo gobolka daawa iyo gobolka sitti lee yihiin mid 7da dhibcood.
Sidookale waxaa iyana maanta galinkii danbe ay ciyaar aad u xiiso badani dhexmartay labada kooxoo ee kawada tirsan Group B waa xulka kubada cagta ee Gobolka Erer iyo Maamuka Magaalada Jigjiga. Ciyaartan oo ahayd ciyaar aad u xiiso badan oo ay koox waliba ku doonaysay inay oogu gudubta wareega 3aad ayaa waxay ciyaartu wakhtigii loogu talagalay kusoo dhamaatay 6 goal iyo 2. Halkaas oo ay guushu ku raacday xulka kubada cagta ee MM Jigjiga oo kaga adkaaday 6 goal iyo 2 Goal.
Iskusoo wada duuboo, ciyaarahan maanta socday ayaa u muuqday ciyaaro aad u xiiso badan kadib markii ay taageerayaasha kooxuhu soo buux dhaafiyeen garoonka kubada cagta ee magaalada jigjiga.